Indlela yokuhlamba isilika kwaye uyigcine intle - Iingubo Zokuhlamba Iimpahla
Indlela yokuhlamba isilika kwaye uyigcine intle
Funda indlela yokuhlamba isilika ngesandla nakwimishini yokuhlamba. Fumanisa ukuba ungaxelela njani ukuba uyakwazi ukuhlamba isilika kunye nendlela yokunyanga isilika erhabaxa emva kokuhlamba.
Ngaba Ungayihlamba Isilika?
Ukuhlamba okanye ukungahlambi isilika ngowona mbuzo wokugqibela. Enye isilika iyahlambeka. Enye isilika ayihlambeki. Uya kufumanisa ukuba unokuhlamba isilika ngokujonga kwifayile ye-iisimboli kwithegi yokhathalela impahla. Ithegi ikuxelela ukuba ingubo ingavaswa na, nokuba ingacocwa njani, kunye namaqondo obushushu ohlukeneyo onokuwasebenzisa. Ngokwesiqhelo, kwimpahla yakho yesilika, uza kuyibona yome-yicocekile kuphela, uhlambe izandla kuphela, okanye iwasha ikhuselekile. Ukuba isilika yakho iyahlambeka, lixesha lokuba ufunde ukuba kanjani.
Ucoceka njani izityalo ze-Aquarium: Iindlela ezikhuselekileyo nezisebenzayo
Ukucoca iiNgxowa zabaqeqeshi
Iingcebiso ezili-10 ezilula zokwenza ukuba ukuhlamba kube mnandi
Umatshini wokucoca ulwelo
Ngaphambi kokuntywila entloko kwindawo yokuhlamba izandla okanye kumatshini wokuhlamba ii-PJs zakho ozithandayo, kubalulekile ukuba uxoxe ngeesepha. Isilika lelaphu elibuthathaka. Ke ngoko, xa uhlamba iimpahla zesilika okanye iipillowases, khangela isepha esichaza ukuba ikhuselekile kusilika. Ezi iisepha zine-pH esezantsi kwaye azitshintshi ubunjani kunye nembonakalo yesilika. Iimpawu nje ezimbalwa ezenzelwe isilika zibandakanya u-Woolite Extra Delicates, i-Persil Silk kunye noboya, kunye ne-Tide ye Delicates.
Indlela yokuhlamba isilika ngesandla
Ngoku lixesha lecandelo lokonwaba: isilika yokuhlamba izandla. Kuba isilika intle kangaka,ukuhlamba izandlayindlela ekhethiweyo yokusebenzisa umatshini wokuhlamba. Ukuhlamba izandla kufuneka ubambe:
Imiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo ngeSilk yokuhlamba izandla
Xa unezinto zakho esele zilungile, lixesha lokuba uhlambe isilika yakho.
Pre-treat any stains on your silkies ties or clothing ngaphambi kokuba uhlambe.
Gcwalisa isinki sakho okanye ityhubhu ngobushushu bamanzi obucetyiswayo engubeni. Ngokubanzi, la ngamanzi abandayo okanye apholileyo.
Yongeza amaconsi ambalwa esepha oyikhethileyo kwaye uxhokonxe.
Thatha ilaphu elimhlophe umanzise.
indlela yokubhalela intombazana oyithandayo kwaye ugcine incoko iqhubeka
Cinezela ngokuchasene nengubo ukuze ubone ukuba ukhona na umbala ophumayo. Ukuba kuyenzeka, khetha ukucoca okomileyo okanye uhlambe le nto wedwa.
Phendulela ingubo ngaphakathi.
Gcoba ingubo emanzini ukuya kuthi ga kwimizuzu engama-30.
Hlanganisa ingubo emanzini ngokuyifaka phezulu nangaphantsi.
Ukucoca amanzi anesepha.
Gcwalisa ibhafu okanye usinki amatyeli amaninzi ngamanzi acocekileyo. Hlanganisa ingubo ukuze ususe yonke into yokuhlamba.
Nje ukuba isepha ihambe yonke, beka itawuli ngaphandle. (Awufuni ukukhupha isilika).
Beka ingubo kwitawuli.
Gcwalisa ithawula phezu kwengubo ukuze uhlambe amanzi amaninzi. Ungasonga ngobunono ingubo kwitawuli ukuze ususe amanzi amaninzi.
Yibeke kwindawo yokuma okanye ubeke i-flat ukuze yome. (Kuphephe ukubeka isilika kwilanga.)
Uhlamba njani isilika kwiWashher
Ukuhlamba iimpahla zakho kwiwasher kuyakhathala. Khawukhumbule nje ukuba yonke into oyenzayo kufuneka ithambe. Ngaphambi kokuhlamba umatshini, kufuneka:
Ingxowa yengubo kwizidli
Ubunono bokuhlamba impahla
Amanyathelo endlela yokuhlamba imoto
Ngaphambi kokubeka iimpahla zakho kwi-washer, khumbula ukuvavanya ukuba yinyani ngombala omhlophe. Ukuba isikhafu sakho okanye umbala wehempe uyaphuma, yise kwindawo yokucoca eyomileyo ukuze ube kwicala elikhuselekileyo.
Beka iisilika zakho engxoweni eyilelwe izidlo.
Beka ibhegi kwindawo yokuwasha yodwa.
Yongeza inani elifanelekileyo lesicoci somthwalo wakho.
Hlela i-washer yakho kumjikelezo ococekileyo okanye omnene, ukujikeleza okufutshane, kunye namanzi okushisa okucetyiswayo. Ukuba uyathandabuza, sebenzisa ukubanda.
Nje ukuba umjikelo ugqityiwe, sebenzisa itawuli ukufunxa ukufuma okungaphezulu xa kukho imfuneko.
Hlanganisa ingubo ukuze yome.
Kuba isilika ziingubo ezintle, ufuna ukutsiba eyomileyo.
Uyihlamba njani i-Pillowcase yeePhepha kunye neeSpredishithi
I-silk pillowases kunye neebhedi zinokongeza inqanaba lokucoca kuba ezi zinokubanjwa ziintsholongwane, ngakumbi ngexesha lokubanda kunye nomkhuhlane. Kwii-pillowcases zesilk kunye neebhedi, kuhlala kungcono ukuzihlamba ngesandla. Ubukhulu becala unokulandela izikhokelo zokucoca isilika ngesandla. Nangona kunjalo, ukwenzela ukongeza ucoceko, yongeza ¼ ikomityi yeviniga emhlophe kwindawo yokuqala. Ngelixaiviniga emhlophe ayizibulali iintsholongwanekunye ne-bleach okanye i-hydrogen peroxide, ithambile ngokwaneleyo ukuba ingatshabalalisi isilika kwaye ibulale uninzi lweentsholongwane. Ukongeza, ukuvumela umoya ukuba wome usuku okanye ezimbini kuqinisekisa ukuba iintsholongwane ezishiyiweyo ziyacinywa.
Ukuthambisa uSilika oMdaka emva kokuhlamba
Ukomiswa komoya kunokwenza isilika ukuba ibe mnandi. Sebenzisa ezi ngcebiso ukuyithambisa.
Ngenisa ngobumnene isinyithi phezu kwayo kwisakhelo 'sesilika' ngelixa usifumile ukuze usithambise.
Xa kuziwa kwisepha, kuncinci okungaphezulu. Ininzi okanye i-detergent engalunganga ingenza isilikhi ibe nzima. Qiniseka ukuba usebenzisa isicoci esine-alkaline.
Ukongeza ¼ ikomityi yeviniga kwindawo yokuqala yokuhluza kunceda ekusebenzeni njengesithambisi sendalo.
Ngaba i-usps ihambisa ikrisimesi eve 2019
Indlela yokuhlamba isilika ngokugqibeleleyo
Ayisiyiyo yonke isilika enokuhlanjwa, kodwa kubalulekile ukuyenza ngokuchanekileyo xa inakho. Kuba unalo lonke ulwazi, lixesha lokuba uqale ngokucoca ii-PJs zakho ozithandayo.
Ezothando Iivintage Collectibles Special Occasion Decorating Umsebenzi Nokuzalwa Komntwana Imithi
kutheni izinja ziphefumla ngokukhawuleza kangaka
jonga iimpawu eziqhelekileyo zetyhefu yenja
ungawasusa njani amabala eoyile endleleni
indlela yokususa i-nail polish kwilaphu
Uluhlu lwemisebenzi yasekhaya kunye nokuba uyenza kangaphi
I-capricorn indoda kunye namava omfazi onamava